Inona no lazain’ny bilaogera momba ny ambanivohitr’India? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Jolay 2018 6:18 GMT
(Marihina fa tamin'ny 28 May 2006 no nanoratana ny lahatsoratra teny Anglisy)
Niresaka momba ny olona nandao ny tanànakeliny ary lasa nitady asa tany an-tanàndehibe i Dilip ao amin'ny Death Ends Fun tao anaty lahatsoratra fohy iray .
Matetika ianao no mahita ao anaty taksy sy ny posy any Bombay ny afisy miloko marevaka misy ny sarin'ny tovovavy iray mipetraka eo ambany hazo, ny lohany eo ambonin'ny tanany ambonin'ny lohaliny . Ary ireto teny telo ireto no eo ambany: “Ghar kab aaoge?” (“Rahoviana no hody ianao?)
Ny tiana ho lazaina mazava ho azy dia ireo mpamily maro nandao ny vady aman-janany tany amin'ny tanànakely ary miasa ao an-tanàndehibe.
Nanoratra momba ny fitsidihana ny sekoly iray tany an-tananakely izay toa lasa zava-niainana tsy manam-paharoa ho azy manokana i Vasukumar ao amin'ny bilaoginy Shadamarshanavasu.
It is a unique experiment of the dream of 3 young men who wanted to follow the teachings of swami vivekananda, Mahatma Gandhi and Subramanya bharati, in letter and spirit.Started in a thatch hut with 3 children, is today a big family of hundreds of students,teachers and staff.I liked the environment which is very friendly.I found all the inmatesboth old and young and all ages in between genuinely at peace with themselves and happy.There was a sense of being partners in the entire process. The villagers also participate actively in the school activities in return for free education and upkeep of their children.
Nahita zavatra tsy manam-paharoa izahay omaly, ny fitsidihana ny fikambanana iray, Sevalaya. Tsy toerana fitaizana zaza kamboty anefa izany; na koa toerana fitaizana beantitra; tsy sekoly ao an-tanànakely ihany koa anefa ; na fikambanana mpanao asa soa manao dokambarotra amin'ny fampahalalam-baovao.
Tsy manam-paharoa momba ny nofinofin'ireo tovolahy 3 izany izay naniry ny hanaraka ny fampianaran'i swami vivekananda, Mahatma Gandhi sy Subramanya bharati, ara-bakinteny sy ara-panahy. Nanomboka tamin'ny trano bongo nisy zaza 3, izay lasa fianakaviana lehibe ankehitriny ahitana mpianatra, mpampianatra ary mpiasa an-jatony. Tiako ny tontolo manodidina izay tena mahafinaritra. Hitako ireo beantitra sy ireo tanora mpiray efitra rehetra, sy ny olona amin'ny sokajy taona rehetra izay tena ao anatin'ny fiadanana sy ny fifaliana. Nisy ny fiaraha-miasa tao anatin'ny dingana iray manontolo. Nandray anjara mavitrika tamin'ny hetsiky ny sekoly ihany koa ny mponina tao an-tanànakely ho setrin'ny fanabeazana maimaim-poana sy ny fikarakarana ny zanany.
Mampahatsiahy antsika i Stolenchildhood.net fa mbola fomba fanao mahazatra hatrany ny fampanambadiana ankizy any India.
Firenena miatrika fahantrana i India, izay ahitana ny sarambambem-bahoaka sahirana vao mahita vola hividianana sakafo roa isan'andro. Izany indrindra no antony mahatonga ireo ray aman-dreny maro avy amin'ny sarangan'olona mahantra mampanambady ny zanany vavy ho takalon'ny vola bebe kokoa.
Na dia niteny aza ny governemanta indiana fa haingana ny fihatsaran'ny toekarena ary miroborobo ny sehatra teknolojia vaovao dia zara raha nahitana fiovana ny faritra ambanivohitr'i India.
Nijery ny tarehimarika sy ny adihevitra sasantsasany manodidina ny fampihenana ny fahantrana any India i Ramesh G. Deshpande ao amin'ny Economics India.
Nandritra ny taona maro lasa, nisy ny adihevitra betsaka teo amin'ny “tena” mpahay toekarena sy ny mpahay toekarena “ara-politika” momba ny fahantrana tao India nandritra ny taompolo 1990.
Nikasika ny olana ara-politika sy ara-antontanisa momba ny fahantran'i India ny adihevitra. Taorian'ny fampidirana ny fanitsiana ara-toekarena tany am-piandohan'ny taompolo 1990, nanatri-maso ny tahan'ny fivoarana ara-toekarena i India saingy mbola lohahevitra mampiady hevitra ny vokatr'izany teo amin'ny fahantrana . Nampiseho ny tarehimarika ofisialy avy amin'ny GOI fa nihena haingana ny tahan'ny fahantrana izay niainga avy amin'ny 36 isanjaton'ny mponina tamin'ny taona 1993-94 ka lasa 26 isanjato tamin'ny taona 1999-2000. Maro ireo mpahay toekarena no nanohitra io tarehimarika io satria toa mampiseho ny fihenan'ny fahantrana kely loatra sy betsaka loatra izany!